10 तपाईं धनी गर्नेछ उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचारै
घर > प्रेरक ब्लग- way2inspiration.com > 10 तपाईं धनी गर्नेछ उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचारै
पोस्ट सेप्टेम्बर 27, 2016 डिसेम्बर 7, 2016 एक. Bharadwaj
जब तपाईं अनलाइन व्यापार सुरु तपाईं आफ्नो मन मा दुई कुरा राख्न छ. एक उत्पादन कस्तो तपाईंले बेच्न चाहेको छ र सेवा कस्तो तपाईं प्रदान गर्न सक्छन्. मुख्यतया उत्पादनहरु को दुई प्रकार बेचिन्छ, जो जानकारी उत्पादनहरु र शारीरिक उत्पादनहरु.
ई-वाणिज्य कम्पनीहरु को उदाहरण जो घर उपकरण देखि सुरु शारीरिक उत्पादनहरू बेच्न लिन, पुस्तकहरू सबै गर्न Apparels. kindle पुस्तकहरू उदाहरण लिन, मा अनलाइन पाठ्यक्रम Udemy, ई-पुस्तकहरु, सफ्टवेयर जो जानकारी आधारित उत्पादनहरु. सेवा को मामला मा, तपाईं भर्चुअल सहायक जस्तै विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छन्, ग्राहक सेवा, दिन हेरविचार, कोचिंग आदि.
अघि बढ्नु अघि 10 तपाईं धनी गर्नेछ उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचारै, निम्न पोस्ट पढ्न:
सर्वश्रेष्ठ अनलाइन व्यापार विचारै.
सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मार्केटिङ र एसईओ सेवा.
विकास र आफ्नो उत्पादन बेच्न:
तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु सिर्जना गर्न र अनलाइन बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एउटा कलाकार हो भने, वेब डेभलपर वा प्रोग्रामर त तपाईं विशेषज्ञता आफ्नो क्षेत्रमा सम्बन्धित उत्पादनहरु सिर्जना र विभिन्न च्यानल द्वारा सामान अनलाइन बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यसपछि तपाईंले बेच्न सक्नुहुन्छ हस्तशिल्प वा चित्रहरु डिजाइन मा विशेषज्ञ छन् मानौं Etsy. तपाईं मुद्रित टी-शर्ट जस्तै merchandised उत्पादनहरू बेच्न सक्छ, टोपी, घर सजाय वस्तुहरू जो ठूलो माग हो.
सफ्टवेयर र आवेदन विकास:
पक्कै पनि सफ्टवेयर उद्योग दिन दिन बढ्दै छ. के तपाईं एक डेभलपर हो भने त तपाईं आवेदन कार्यक्रम बनाउन र विभिन्न च्यानल मा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं जावा मा कार्यक्रम ज्ञान जान्नु आवश्यक छ, .नेट, ग # आदि. तपाईं व्यापार लागि एन्ड्रोइड आवेदन विकास गर्न सक्छौं, शिक्षा, तथ्याङ्क, ज्योतिष. एन्ड्रोइड आवेदन र सफ्टवेयर उपकरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ.
वेब विकास र डिजाइन:
अनलाइन कारोबार दिन दिन booming छन् र प्रत्येक कम्पनी आफ्नो अनलाइन बजार बढ्न आफ्नो वेबसाइट आवश्यक. सफ्टवेयर विकास वेब विकास र डिजाइन जस्तै ठूलो माग हो. प्रत्येक कम्पनी अनलाइन आफ्नो व्यापार बढ्न आफ्नो वेबसाइट आवश्यक. तपाईं जस्ता विभिन्न साइटहरु वेब डिजाइन परियोजनाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् Fiver, स्वतंत्र, गुरु आदि. वा तपाईं आफ्नो वेबसाइट बनाएर आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्छन्.
संबद्ध कार्यक्रम सामेल:
आफ्नो अनलाइन व्यापार शुरू एक संबद्ध कार्यक्रम छ साँच्चै बुद्धिमानी विधि सामेल हुँदै गर्न. तपाईं उत्पादनहरु खरीद वा विकास को टाउको दुखाइ लिन आवश्यक छैन, ग्राहक सेवा, ढुवानी आदि.
10 तपाईं धनी बनाउन भनेर उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचार निश्चित तपाईंको व्यापार बढ्न मदत गर्नेछ.
तपाईं बजार मा लोकप्रिय हो जो अरूलाई उत्पादनहरु प्रवर्द्धन गर्न या तपाईं यसलाई लोकप्रिय बनाउन सक्छ. तपाईं आफ्नो साइटबाट उत्पादन पृष्ठ गर्न लिंक दिन र प्रत्येक बिक्री को लागि आयोग प्राप्त गर्न सक्छन्. र तपाईं शारीरिक जानकारी उत्पादनहरु साथै उत्पादन बढाउन सक्छ.
ई-वाणिज्य यो दशक मा सबै भन्दा ठूलो उद्योग हो. तपाईं ई-वाणिज्य स्टोर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एक ई-वाणिज्य सुरु गर्न गाह्रो हुन सक्छ तर यो तपाईं को लागि एक जादूगर गरेको ढुङ्गा हुनेछ. उत्पादनहरु पुस्तकहरू वा केक जस्तै को एक प्रकार देखि बिक्री सुरु त तपाईं प्रजातिहरू वृद्धि.
अनलाइन विक्रेता बन्न:
उत्पादनहरु अनलाइन बिक्री एक सरल र सजिलो अनलाइन व्यापार विचार छ. तपाईं साथै आफ्नो उत्पादनहरु अरूलाई बेच्न सक्नुहुन्छ. बस तपाईं थोक व्यापारी संग राम्रो कनेक्शन गर्न आवश्यक. तपाईं सस्तो मूल्य संग धेरै मा किन्न र जस्तै eBay विभिन्न साइटहरूमा बेच्न सक्नुहुन्छ, अमेजन, एक उच्च मूल्य Snapdeal. तपाईं यस आफ्नो वेबसाइटमा आवश्यक छैन. यसरी, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा उत्पादनहरु बेच्न र संसारभरि ग्राहकहरु संग सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छन्.
सामाजिक मिडिया व्यवस्थापन:
त्यहाँ आफ्नो सामाजिक मिडिया प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न समय नगर्ने उच्च प्रोफाइल व्यक्ति हजारौं छन्. तपाईं आफ्नो एजेन्सी सुरु र प्रबन्ध प्रोफाइल को सेवा प्रदान गर्न सक्छन्. किनभने तपाईं एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धकको रूपमा सामेल यदि तलब प्राप्त तपाईं पूरा गर्न सक्छ. तर तपाईं फेसबुक जस्तै विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ, ट्विटर, LinkedIn आदि.
यसलाई जो जो कोहीले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अर्को सबै भन्दा राम्रो अनलाइन व्यापार. त्यहाँ जस्तै धेरै freelancing साइटहरु छन् Upwork, Fiverr, तपाईं एक स्वतंत्र र बोली आयोजनाका रूपमा सामेल गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ स्वतंत्र. तर तपाईं एक क्षेत्र मा केही विशेष सीप आवश्यक छ. सबैभन्दा फ्रीलांसरों थप परियोजनाहरू प्राप्त गर्न धेरै कौशल उल्लेख तर यसरी तिनीहरूले अनुबंध ढीले. बस के तपाईं आफ्नो सान्दर्भिक sills मा विशेषज्ञता हो उल्लेख.
परामर्श र कोचिंग:
इन्टरनेट दुनिया भर साझेदारी गर्न आफ्नो ज्ञान बनाएको छ. तपाईं ज्योतिष जस्तै ज्ञान छ विभिन्न विषयहरू मा अनलाइन परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, Vaastu, चिकित्सा, स्वास्थ्य र फिटनेस, खाना पकाउने आदि. तपाईं भिडियो पाठ्यक्रम बनाउन र अनलाइन प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदान गर्न सक्छन्.
डोमेन र वेबसाइट रिसेलिङका:
डोमेन र वेबसाइट रिसेलिङका दुई अलग अनलाइन व्यापार विचार गर्दै छन्. तपाईँले GoDaddy वा अन्य कम्पनीहरु देखि एक सस्तो मूल्य लागि थोक मा डोमेन किन्न र साथ बेच्न यी गर्न सक्नुहुन्छ2गर्न3पटक उच्च मूल्य. तपाईं जो उच्च मूल्यमा बेच्न सक्छौं डोमेन किन्न आवश्यक.
तपाईं यो लेख मन पराएका छन् आशा: 10 तपाईं धनी गर्नेछ उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचारै.
तपाईं शीर्षकहरू प्रचलनमा मा राम्रो अनुसन्धान गर्न र डोमेन किन्न र यसलाई बेच्न छ GoDaddy नीलामी वा अर्को बजार ठाउँ. त्यसै गरी, तपाईं डोमेन काम मा खरीद र होस्टिंग द्वारा एक वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ 2-3महिना र यसमा resell 10 पटक उच्च मूल्य अनलाइन.
10 तपाईं धनी गर्नेछ उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचारैअनलाइन व्यापार विचारै
Pingback: 10 तपाईं धनी गर्नेछ उत्कृष्ट अनलाइन व्यापार विचारै | way2inspiration()
सास जीवनको संगीत बनाउन
वर्तमान बस्न र भविष्य: आफ्नो वर्तमान भविष्य निर्णय
हाँस्न यसलाई एक बानी बनाउन - एक मुस्कान अरूलाई जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ
जीवनमा साँचो सफलता कसरी प्राप्त गर्न
आत्म-मनोरञ्जन द्वारा तनाव निको गर्न शक्तिशाली सूत्र
शीर्ष5मा Google मा आफ्नो वेबसाइट छिटो श्रेणीका एसईओ रणनीति 2018
सिकारुहरूको लागि सामग्री लेखन सुझाव
सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मार्केटिङ, एसईओ अनलाइन प्रशिक्षण र सेवा
सिक्न अग्रिम डिजिटल मार्केटिङ कोर्स
प्रेरक ब्लग- way2inspiration.com
एसईओ परामर्शदाता भारत | डिजिटल मार्केटिङ सेवा | एसईओ सेवा